यस्ता हुनेछन् प्रदेशका कार्यालय र निवास – Etajakhabar
यस्ता हुनेछन् प्रदेशका कार्यालय र निवास
काठमाडौं, पुस २२ – प्रदेशको राजधानी कहाँ होला ? प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्रीहरू को–को बन्लान् ? यी प्रश्नको जवाफसँगै प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालय र उच्च पदस्थहरूको निवासको संरचना कस्तो होला भन्नेबारे पनि अहिले सबैमा चासो छ ।
यही चासो र सरोकारका बीच सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेशसभा भवन, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री, प्रदेशसभा हल, ६ प्रदेश सचिवको कार्यकक्ष र निवासको स्थायी ढाँचा (लेआउट) को प्रारम्भिक प्रस्ताव तयार पारेको छ । र, तत्काल बन्ने अस्थायी संरचनाका लागि समेत यसैलाई आधार बनाइने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले कार्यालयहरूका अतिरिक्त निवासका प्रारम्भिक ढाँचा पनि तय गरेको छ ।
मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार प्रदेश प्रमुख कार्यालयको कुल क्षेत्रफल १६९ वर्गमिटर हुनेछ । जसमा कार्यकक्ष, बैठक कक्ष, पीए कक्ष, पीए प्रशासनिक कक्ष, प्राइभेट कक्ष र शौचालय रहनेछन् । प्रमुखको कार्यकक्षमा करिब २६ लाख रुपैयाँको फर्निचर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय ९८२ वर्गमिटरको हुनेछ, जसमा मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्ष, बैठक कक्ष, निजी तथा प्रशासनिक कक्ष, प्रतीक्षालय रहनेछन् । मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षको क्षेत्रफल मात्रै १६९ वर्गमिटर हुनेछ । त्यसबाहेक सोही कार्यालयअन्तर्गत नै एक जना प्रदेश मुख्य सचिवको कार्यकक्षसमेत रहनेछ । जसअन्तर्गत एउटा कार्यकक्ष, बैठक कक्ष, पीए कक्ष, एउटा प्रतीक्षालय र प्राइभेट कक्ष रहनेछन् । त्यसैगरी मुख्यमन्त्रीको कार्यालयअन्तर्गत नै ४ जना सहसचिव, ११ जना उपसचिव, २५ जना शाखा अधिकृत, १४ जना नासु र १२ जना सहयोगी कर्मचारी बस्ने ठाउँसमेत हुनेछ । मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षका लागि मात्र करिब २० लाख रुपैयाँको फर्निचर लाग्ने अनुमान मन्त्रालयको छ ।यो खबर सुरेशराज न्यौपानेले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
प्रदेशका मन्त्रीहरूका लागि पनि बेग्लाबेग्लै कार्यकक्ष रहनेछन् । प्रदेश मन्त्रीको कार्यकक्षमा बैठक कक्ष, प्रतीक्षालयसहितको निजी तथा प्रशासनिक पीएको कार्यकक्ष र प्राइभेट कक्ष रहनेछन् । यसका लागि करिब १ सय ५६ वर्गमिटर क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । यसबाहेक प्रदेश मन्त्रालयमा एक जना सहसचिव, दुई जना उपसचिव, दुई जना शाखा अधिकृत र १० जना सहयोगी कर्मचारीसमेत रहनेछन् । जसका लागि करिब ३ सय वर्गमिटर क्षेत्रफल आवश्यक पर्नेछ । प्रदेश मन्त्रीको कार्यकक्षका लागि ८ लाख २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको फर्निचर आवश्यक पर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सचिवको कार्यालयका लागि भने १०२.५० वर्गमिटरको कार्यकक्षको नमुना तयार पारिएको छ, जसमा एउटा कार्यकक्ष, एउटा शौचालय, एउटा बैठक कक्ष, एउटा पीएसहितको प्रतीक्षालय र एउटा निजी कक्ष रहनेछ । सचिवको कार्यकक्षका लागि ५ लाख ७४ हजार रुपैयाँको फर्निचर लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण मन्त्रालयले प्रदेशसभाको सचिवालयका लागि समेत आवश्यक पर्ने ढाँचा तयार पारेको छ । करिब ३ सय २० वर्गमिटर क्षेत्रफल ओगट्ने उक्त सचिवालयमा सभामुख, प्रदेशसभा सचिव, दुई जना उपसचिव, ६ जना शाखा अधिकृत, एघार जना नासु, सात जना मर्यादापालक र ६ जना सहयोगी कर्मचारी रहनेछन् । सभामुखको कार्यकक्षमा बैठक कक्ष, प्रतीक्षालयसहितको पीए कक्ष, शौचालय र प्राइभेट कक्षसमेत रहेछन् । त्यसले १०२.५ वर्गमिटर क्षेत्रफल ओगट्नेछ । सभामुखको कार्यकक्षका लागि ७ लाख ६८ हजार रुपैयाँको फर्निचर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी ६५.५ वर्गमिटरमा फैलिएको प्रदेशसभा सचिवको कार्यालयमा एउटा कार्यकक्ष, एउटा शौचालय, बैठक कक्ष र प्रतीक्षालयसहितको एउटा पीए कक्ष रहनेछ ।
प्रदेशसभा हलको फरक–फरक ढाँचा पनि प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश १, २, ३, ५ मा २ सय क्षमताको सभाहल रहनेछ भने प्रदेश ४, ६ र ७ मा १५० क्षमताको सभाहल रहनेछ । त्यसैगरी, प्रत्येक प्रदेशमा २ वटा ५० क्षमताको सर्वदलीय बैठक हल हुनेछ । प्रदेशसभा हलमै सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री, विपक्षी दलका लागि समेत एक–एक वटा कार्यकक्ष रहनेछन् । मिडिया रुम र कन्ट्रोल रुमका अतिरिक्त ४ जना शाखा अधिकृत, ६ जना नासु र २ जना सहयोगी कर्मचारी संयुक्त रूपमा बस्न मिल्ने कोठा पनि रहनेछ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, पौष २२, २०७४ समय: ८:१५:४४
जमिन फाट्न थालेपछि आठ घर पहिरोको जोखिममा
एयरहोस्टेजको जागीर छाडेर यि सुन्दरी पोर्न फिल्म खेल्नतिर लागीन् र सुनाइन् सबै चकित पर्ने कुरा
पार्टी एकताका विषयमा एमाले र माओवादीबिच दुरी बढीरहेको बताइएका बेला प्रचण्डले गरे यस्तो खुलासा
७२ वर्षे हजुरआमा उमेरकी महिलासँग १९ वर्षका ह्याण्डसम बेहुलाले गरे बिहे, पहिलोपटक एकसाथ रात बिताउँदाको अनुभव यसरी सुनाए
कुवेतमा गैरकानूनी रुपमा बसेका ५ हजार नेपालीमध्ये ४ हजार नेपाली स्वदेश फर्किदै, यस्तो गम्भिर अभियोगमा मुछीएकाहरु फर्किन पाएनन्
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउनै लाग्दा उनको हत्याको षड्यन्त्र रचेको आरोपमा एक ब्यक्ति पक्राउ